iPhone6Plus | အိုင်ဖုန်းသတင်း
El iPhone ကို6Plus အား ၎င်းသည် Apple ၏အကြီးမားဆုံးဖုန်းဖြစ်သည်။ နှင့်အတူ 5,5 လက်မ, iPhone6Plus အသစ်သည် Apple ၏ phablet လောကသို့ပထမဆုံးခြေလှမ်းဖြစ်သည်။
အိုင်ဖုန်းတစ်ခု အတိအကျ iPhone6နဲ့တူ ဒါပေမယ့်ကြီးမားတဲ့ screen နဲ့ resolution 1080p နဲ့အထူ (၇.၁ မီလီမီတာ) ကိုဖြတ်ပြီးဘာမှမပြောင်းလဲပါဘူး။ iPhone 7,1s ထက်ပါးလွှာနေတုန်းပဲ။
A8 ပရိုဆက်ဆာ, M8 coprocessor, 64-bit ဗိသုကာ၊ Retina Display HD, 8MP ကင်မရာကိုအဆင့်မြှင့်တင်, 1080fp 60fps နှင့် slo-motion မှာ 240fps; Navigation အပါအ ၀ င် Touch ID အသစ်နှင့်ပိုမိုလုံခြုံမှုရှိခြင်း၊ ဘက်ပေါင်းစုံငွေပေးချေမှုနှင့်အတူ NFC ကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ် iPhone6ကအရာအားလုံးကိုပေးပေမယ့်အမြင့်ဆုံးအရွယ်အစားနဲ့ pixel လိုအပ်နေသောအသုံးပြုသူများအတွက်။
စမတ်ဖုန်းသုံးစွဲသူများအတွက်အများဆုံးသောကိစ္စရပ်တစ်ခုမှာဘက်ထရီသက်တမ်းဖြစ်သည်။ ဒါကြောင့် Apple ကအလိုရှိခဲ့တာပါ iPhone6Plus အသစ်ကိုအသုံးပြုသူများအားလုံးဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာပါစေ ဥပမာအားဖြင့် iPhone6အပါအ ၀ င်ကျန် Apple Terminal များထက်ဘက်ထရီသက်တမ်းပိုမိုကြာရှည်သည် 16 ရက်ကြာချိန်ကို stand-by mode မှာiPhone 10s (သို့) iPhone5ကြာရှည်ခံသော ၁၀ ရက်နှင့်နှိုင်းစာလျှင်၎င်းသည်အဓိကတိုးတက်မှုတစ်ခုဖြစ်သည်။
သိသောအာရုံခံကိရိယာများအပြင် Touch ID၊ သုံးရိုးတံ Gyroscope, Accelerometer, Proximity, Ambient Light Sensor; ယခုတွင်လည်းပါဝင်သည် ဘာရိုမီတာ.
၎င်း၏စျေးနှုန်းကနေစတင်သည် 799 ယူရို ၁၆ ဂစ်၊ ၆၄ ဂစ်နှင့်ယူရို ၈၉၉၊ ၉၉၉ ယူရိုက ၁၂၈ ဂစ်ပါ စွမ်းရည်။
iPhone6Plus တွင်နောက်ဆုံးရသတင်းများ
အောက်တွင်ဖော်ပြထားသောအရာအားလုံးကိုရှာဖွေတွေ့ရှိနိုင်သည် Apple ၏ iPhone6Plus အကြောင်းနောက်ဆုံးသတင်းများ ဤအပိုင်းကိုမှတဆင့်
Apple သည် Bendgate နှင့် Touch ရောဂါတို့၏ပြproblemsနာများကိုသူတို့မ ၀ င်မီကြာမြင့်စွာကတည်းကသိခဲ့သည်
por Louis padilla လွန်ခဲ့တဲ့4အနှစ် .
သေချာတာပေါ့ iPhone6နဲ့6Plus ကိုပျက်ဆီးစေတဲ့ Bendgate ဆိုတာကိုမှတ်မိမှာပါ။
Apple ကပျက်နေသော iPhone6Plus အား iPhone 6s Plus ဖြင့်အစားထိုးနိုင်သည်
por Karim Hmeidan လွန်ခဲ့တဲ့4အနှစ် .
iPhone ပေါ်မှာလုံးလုံးရိုက်ကူးထားတဲ့ရုပ်ရှင်ကားဟာထိုင်ပေရုပ်ရှင်ပွဲတော်မှာ ၁၀ ဦး လျာထားခြင်းခံရတယ်
por Karim Hmeidan လွန်ခဲ့တဲ့5အနှစ် .
por Carmen rodriguez လွန်ခဲ့တဲ့5အနှစ် .
iOS 8 အသစ်ထုတ်ပေးနေသောပြproblemsနာများကိုကျွန်ုပ်တို့အားလုံးသိရှိပြီးမေမေကဲ့သို့ update ကိုစောင့်မျှော်နေသော်လည်း ...
အက်ပဲလ်ဟာ iPhone6Plus အသုံးပြုသူများအတွက်မျက်နှာပြင်ပြrepairနာများအတွက်ပြန်လည်ပြုပြင်ပေးတဲ့အစီအစဉ်တစ်ခုပါရှိသည်
por Ignatius ခန်းမ လွန်ခဲ့တဲ့6အနှစ် .
လွန်ခဲ့သောရက်သတ္တပတ်အနည်းငယ်က iPhone6terminal ၏မျက်နှာပြင်နှင့်ပြsufferedနာတစ်ခုကြုံခဲ့ရသောသူများမှာ ...
iPhone 6s ဟာ ၂၀၁၅ ခုနှစ်ရဲ့အင်အားအကြီးဆုံးစမတ်ဖုန်းဖြစ်တယ်လို့ AnTuTu ကဆိုပါတယ်
por ပါပလော Aparicio လွန်ခဲ့တဲ့6အနှစ် .
စက်ပစ္စည်းတစ်ခုအတွက် 4GB RAM နှင့် octa-core ပရိုဆက်ဆာများမလိုအပ်ပါဟုကျွန်ုပ်တို့အကြိမ်ပေါင်းများစွာပြောခဲ့သည်။
por ပါပလော Aparicio လွန်ခဲ့တဲ့7အနှစ် .
Apple က iPhone6version နှစ်ခုကိုဖြန့်ချိသောအခါအသုံးပြုသူများအကြိုက်ဆုံးမှာ 4,7 model ဖြစ်သည်။
App Store မှာအလျားလိုက် app ပုံများပေးထားပြီးဖြစ်သည်
por Ignatius ခန်းမ လွန်ခဲ့တဲ့7အနှစ် .
အကယ်၍ သင်က iPhone6/ 6s Plus ကိုအသုံးပြုသူများဖြစ်တယ်ဆိုရင်ဖုန်းကိုဘယ်နေရာမှာထားမယ်ဆိုတာသိပြီလား။
အိုင်ဖုန်းအသစ်များသည် ၁ နာရီကြာရေအောက်ရောက်သည်။
por Juan Colilla လွန်ခဲ့တဲ့7အနှစ် .
iPhone 6s Plus သည်အက်ပလီကေးရှင်းများအား ၆ Plus ထက်အနည်းငယ်ပိုမြန်သည်။
သင်သိသည့်အတိုင်းမနေ့ကပထမဆုံးကံကောင်းသူများက iPhone 6s (သို့) iPhone တစ်ခုကို ၀ ယ်နိုင်ခဲ့သည် ...
South BookBook (၁၂) လုံး၊ မင်းရဲ့ iPhone အတွက်အကောင်းဆုံးကိစ္စတစ်ခု
por Louis padilla လွန်ခဲ့တဲ့7အနှစ် .
ငါရှိခဲ့သည့် iPhone မော်ဒယ်များအတွက်အမှုများစွာကိုစစ်ဆေးပြီးနောက် (၄ င်းသည် iPhone4မှဖြစ်သည်။ )